Nika Amandla Ukuthengisa Kwakho Kwe-inthanethi ngeCDNify | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 26, i-2013 UMike Cunsolo
Sibe lapho sonke angithi. Ukukhandleka emkhankasweni wokumaketha weklayenti lakho, ukwenza amahora wokuhlanya nokwenza ama-task amaningi njengabakhulu kunabo bonke. Ukuzama konke okusemandleni akho ukuqinisekisa ukuthi yonke into imi ngomumo, ukuze izinto zihambe kahle ngangokunokwenzeka lapho uya bukhoma. Impela ngiye lapho futhi ngilahlekelwe ithrekhi yenani lamahora engiwasebenzisile ngigijimisa okomuntu ohlanyayo. Kepha ukuthakazelisa kuyingxenye enkulu yokuthi kungani wenza i ngoba uzokwethula bese ubona wonke umsebenzi onzima uqala ukukhokha.
Abantu bahlanganyela nokuqukethwe kwakho futhi bayabelana ngakho. Ukuqwashiswa komkhiqizo weklayenti lakho kuyanda futhi okuphela kokufanele ukwenze ukuhlala phansi ubukele ukuthi umsebenzi wezokuxhumana uphenduka ukuguqulwa kwamawebhusayithi. Isikhathi sokuvula ubhiya.
Kepha-ke, njengoba uvula ibhodlela lakho lesibili, kwenzeka okubi kakhulu! Iwebhusayithi yakho igaya umile ngaphansi kobunzima bethrafikhi. Okwamanje akukho okuningi ongakwenza ngaphandle kokuthi usuyitholile isipele (ngaphandle kokuthi uvule lelo bhiya lesibili).
Njengomphathi Wezokukhangisa Ngedijithali ngidinga nje ukwazi ukuthi umkhankaso wami uzophenduka inguquko. Anginaso isikhathi ngaso sonke isikhathi (noma ulwazi lobuchwepheshe uma ngithembekile) ukucabanga ngokuthi ngabe indawo esithumela kuyo abathengi abangaba khona izokwazi yini ukumelana nokutheleka kwabantu abaningi.
Futhi kulapho CDNify kungakusiza.
CDNify iyi-Startup engiyisebenzelayo njenge-CMO, eyasungulwa nguJames Mulvany. Indlela engcono yokuchaza ujames ngumsunguli. Unguhlobo lomuntu oqondayo ukuthi angazithatha kanjani izinto eziyinkimbinkimbi futhi azenze zibe lula ukuxhumana nazo. Futhi yilokho okwenziwa yiCDNify. Kuthatha okuthile okuvame ukukhathaza ukukwenza futhi kube lula.
Uma uke wazama ukusebenzisa uhlelo lwe- inethiwekhi yokulethwa kokuqukethwe (CDN) ngaphambili, uzokwazi ukuthi akuyona into elula ukuthola ikhanda lakho nxazonke. Indlela yokusebenza embonini 'ngosayizi owodwa kufanelana konke', okuyindlela eqinisekile yomlilo yokuzishiya uphuma ephaketheni futhi ukhokhele nezinsizakalo ongazidingi. Lokhu yinto esizama ukuyiguqula.
I-CDNify yinethiwekhi yokulethwa kokuqukethwe eyenza kube lula ngokumangazayo ukwenza i-CDN isebenze. Kuyashesha ukuqalwa futhi okuhle kunakho konke, kuthatha okuqukethwe kwakho futhi kukudlulisele kuzithameli zakho ngokushesha - okusho ukuthi akudingeki ukhathazeke ngezinto eziyinkimbinkimbi futhi ungagxila ekunikezeni umkhankaso omangalisayo esikhundleni salokho.
Ngokusebenzisa i-CDNify ungasho ukuvalelisa kumkhankaso wezipikisi zethrafikhi ezingqongqoza isiza sakho ungaxhunyiwe ku-inthanethi. Ngoba siyi-CDN 'ehlanganisiwe' singakusabalalisa okuqukethwe kwakho kuyo yonke inethiwekhi yethu yamafu, sinciphise izikhathi zokulayisha futhi siqinisekise ukuthi isayithi lakho lingamelana nama-traffic surges. Lokhu futhi kuyenza ibize kakhulu futhi kusho ukuthi ukhokhela kuphela idatha oyisebenzisayo.
Inzuzo enkulu yokuba yi- kuhlanganisiwe ukuthi singagxuma phakathi kwamanethiwekhi wamafu ahlukene, okusivumela ukuthi silethe ngokushesha okuqukethwe kwakho ngokususelwa endaweni yezithameli zakho. Lokhu kunikeza isipiliyoni esisheshayo, esijabulisayo kubo futhi kukusiza ukuthi ukwandise imiphumela yomkhankaso wakho ngokuguqula izinkinobho zamehlo zibe ukuchofoza.
Okwamanje sinakho Ama-POP angama-40 emhlabeni jikelele futhi sikhulisa le nethiwekhi ngaso sonke isikhathi. Sisebenza futhi ekuhlanganisweni okuhlukahlukene ukwenza imizamo yakho yokumaketha ibe lula noma ngabe uletha muphi umkhankaso kulowo mkhankaso.
Ungabhalisela isivivinyo samahhala samasonto amabili manje ku-www.cdnify.com futhi sizoba khona ukukusiza uqalise.
UMike Cunsolo uyi-CMO ye- CDNify, inethiwekhi yokulethwa kokuqukethwe eyenza kube lula ukuthola ukusebenza kwe-CDN.